Gini kpatara Google Doe $ n't Care | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 4, 2010 Satọde, Febụwarị 20, 2016 Douglas Karr
Gụọ Dee Web nwere isiokwu na ala ubi na mmetụta dị na ọchụchọ. Anyị tụlere ụlọ ọrụ ọdịnaya na otu ụlọ ọrụ na Webtrends ọfụma… ezigbo oge nchịkọta ga-arụ ọrụ n'ezie.
Ugbo ala di iche-iche bu saịtị ndi na-ebiputa ọdịnaya iji jide okporo ụzọ injinia ọchụchọ maka uru. Hmmm… dị ka ịde blọgụ maka ịchọ m. Echere m n'ezie na ubi ọdịnaya bụ ezigbo echiche ma ọ ga - eme ka nsonaazụ ọchụchọ Google nke ọma.
Google achọghị ịma.
Ha ga - eme dị ka ha si elekọta (dị ka ha si eme ka ha abụghị ndị ọjọọ), mana ha achọghị ịma. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Nke bụ eziokwu bụ na nchọta ọchụchọ Google na-amịrị ma na-akawanye njọ. Ọ bụrụ ugbo ọdịnaya ana aziza n'elu nsonaazụ ọchụchọ na-aza ajụjụ m, m ga-enwe obi ụtọ. Google emeela ka anyị pịa pịa nsonaazụ, kwadoo, pịa nsonaazụ nke abụọ, weghachite, pịa nsonaazụ nke atọ, rịọrọ yana okwu dị iche iche wee mee ya ọzọ. Olu nke ọdịnaya Google nwere ike ịkọwapụta na-afụ ụfụ, mana nsonaazụ ya na-ackụ.
Revenuekpụrụ ntinye ego nke Google bụ ere mgbasa ozi, anaghị emepụta nsonaazụ ọchụchọ dị mma. Ọ bụrụ na Google rụpụtara nsonaazụ maka gị nke ahụ abụghị ihe ị na-achọ, mana peeji nsonazụ nwere mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ ọ bụla kwa-abụọ na-akpali akpali, Google nwetara ụgwọ ọrụ maka nsonaazụ ya. E nwere ọtụtụ nke ịkwụ ụgwọ-kwa-click atọ ndị yiri nkata si n'ebe… na Google chọrọ ebe ị ga-etinye ya.
Ọ bụrụhaala na Google kwadobere òkè nke ahịa ya, ọ na-aga ịdabere na ahịa ahụ ogologo oge. Ọzọkwa, Google nwere kwadoro ndị ọrụ ya na-arụ ọrụ banyere adịghị ike ya. Ha emeela nke ọma - ọ bụ ya mere Bing ji bụrụ ụlọ ọrụ ọchụchọ ka mma mana ọ na-enwe oge siri ike ịhapụpụ òkè ahịa.
Blog ọ bụla bụ ugbo ọdịnaya, na ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-aghọta search mkpụrụ blog posts iji zube okporo ụzọ njin nchọgharị ka ukwuu. M na-enyocha okporo ụzọ njin ọchụchọ m, na-agbaso isiokwu okwu, ma na-arụ ọrụ iji tinye ọdịnaya dị ukwuu nke ga-ebugharịkwu okporo ụzọ. Kedu ka ị ga - esi ama ọdịiche dị n’ubi ọdịnaya na akwụkwọ mma? Amaghị m na ị nwere ike.
Echere m na ugbo ọdịnaya bụ azụmahịa siri ike. Heck - M malitere ulo oru Tech Tech mgbere… ọ bụ ihu ọma a ọdịnaya ugbo nke Marketing Technology ngwaọrụ, ngwaahịa na ọrụ. Enwere m otu ihe, agbanyeghị. E nwere ọtụtụ ebe nchịkọta na ebe ahụ na mkpụrụ ọdịnaya mana ha enweghị uru nke aka ha.
Otu n'ime saịtị dị otú ahụ bụ ihe a maara nke ọma na ndị hụrụ n'anya site na ụmụ nwoke Silicon Valley link Mahalo (njikọ ejiri aka hapụ). Aaron Wall emeela ezigbo ọrụ na nsuso Mahalo gara n'ihu na-akwalite ọdịnaya nke ahụ abụghị nke ha. Ọzọkwa, Jason Calacanis makwaara - ebe ọ bụ na ọ na-akpali isiokwu ndị na-ewu ewu na peeji nke Mahalo site na mgbasa ozi mgbasa ozi iji mee ka ọtụtụ ndị ọzọ na-agagharị.
Kedu ihe nke a pụtara maka ndị ahịa? Ọ bụghị ozi ọma… ọ pụtara na ị bụghị naanị na-alụ ọgụ mpi maka search engine ogo, ị na-asọmpi na ọdịnaya ugbo na-achọ ka ibugharị okporo ụzọ na saịtị ha maka uru.
Mgbe ọdịnaya ugbo na-adọta ezu search engine ogo na okporo ụzọ na ha na-enwe ike na-akwado ha onwe ha mgbasa nkesa usoro na bụ ihe bara uru karịa Google… naanị mgbe ahụ ka Google ga-akwa ákwá ma malite ime ihe banyere nke a.
Tags: ọrụ ugbogoogle +nhazisearch engine njikarịchaA